Ahoana no mba hanoratra taratasy varotra ho an'ny dokam-barotra?. Blog XMailer.
Ny panorenana singa mandaitra dokam-barotra:
Miditra bebe kokoa ny fifandraisana vaovao ao amin'ny gazety. Aza mianina fotsiny ny finday sy ny telefaonina mampiasa tariby finday, ho azo antoka fa manome Ny e-mail, skype, ICQ number sy ny sisa. Mety ho mpanjifa kokoa ny telefaonina toy ny fomba hifandraisana amin'ny olona tia manoratra mailaka na ny fampiasana hafa ny endriky ny fifandraisana. Arakaraka ny karazana fifandraisana dia hapetraka ao amin'ny taratasy - ny tsara kokoa dia ho Amin'ny gazety.
Esory izay rehetra tsy misy vaovao avy amin'ny dokam-barotra (avy amin'ny lisitra), avelao ihany ny tena hevi-dehibe. Raha tsy izany, vitsivitsy ny olona sahy mamaky mankaleo, ataotao ary tsy nitondra zotran-loading ' ny soratra.
Ny anaram-boninahitra dia tokony ahitana ny famaritana fohy ny entana na asa izay atolotra. Ohatra, raha toa Ianao ka mivarotra zavatra fiara - tsy tokony hanoratra ao amin'ny lohapejy "Tsara ny andro!", ny vahaolana tsara indrindra dia ny hanoratra — "ny modely Farany alemana fiara." Ankehitriny, raha misy olona liana amin'ny zavatra fiara, dia azo antoka fa ho liana amin'ny ny votoatin'ny taratasy ity ad, ary dia azo inoana fa mamaky izany, ary Ny fanentanana hitondra ny vokatra irina.
Tsy milaza ny adiresy ao amin'ny vohikala sy Ny mailaka manokana. Tokony mamaritra ny e-mail, manokana ajoro ho an'ny dokambarotra. Raha tsy izany, Ny ofisialy ny toerana sy ny fepetra manokana e-mail mety ho voasakana amin'ny spam sivana. Ny antony dia mety ho, izay ny fitoriana ny fitantanana ny fampiantranoana ho an'ny namany sary. Tsy mba mitaraina rehefa tsy afa-po amin'ny mpifaninana. ka tezitra amin'ny spam ny olona izay tsy te-vaovao ampahany amin ' ny dokam-barotra.
Tsy mampiasa sary sy ny adiresy aterineto ao An-mailaka hoe efa ampiasaina amin'ny bahoaka tapakila (rehefa afaka efa ho voarara ny spam sivana). Tokony ihany koa hisorohana ny famoronana lehibe loatra ny habeny layouts, toy izany indrindra dia mampitombo ny mety ho fizarana sivana ' ny paositra. Raha toa ka tsy miraharaha ireo fitsipiky Ny gazety dia afaka ihany koa ho mampidi-doza.
Mikasa ny hanao na inona na inona ny mizara, midika izany eo amin'ny taratasy. Dia fantatra fa ny olona dia tia ny fanomezam-pahasoavana toy izany koa ny fihenam-bidy sy ny tombontsoa isan-karazany. Raha manapa-kevitra ny hanolotra azy ireo, noho izany afaka hampitombo be ny isan'ny valinteny avy amin'ny dokambarotra ity.
Ny soa. Rehefa nanoratra taratasy, aza adino ny hizara ny tombontsoa, dia tokony hita taratra ao Ny gazety. Tsy ho saro-kenatra, miresaka momba ny tombontsoa noho ny mpifaninana raha manao zavatra tsara kokoa noho ny azy ireo — fa mendrika ny fizarana ho azo antoka!
Amporisiho ny mpividy ny asa . Eritrereto ny fomba azonao atao ny mandrisika ny olona mba avy hatrany hampandre Anareo rehefa avy namaky Ny dokam-barotra taratasy. Toy ny fitsipika, rehefa avy nahazo e-mail newsletters olona fifandraisana an-tsoratra Ny orinasa ary avy eo dia hanadino ny momba izany, shelved. Zava-dehibe ny mamporisika ny mpanjifa mba hifandray anao. Hanoratra ny dokam-barotra taratasy, ohatra, ny manaraka fakam-panahy hanolotra "ny folo Voalohany mpiadina milina fanasan-damba discount!", sy ny add — "Maika hividy, ny fihenam-bidy manan-kery afa-tsy ny fiafaran' ny volana!".
Be dia be ireo taratasy ireo any amin'ny namany sary. Miezaka manoratra isan-karazany ny safidy eo amin'ny taratasy. Ohatra: "Fanamboarana PC", "Manamboatra solosaina manokana — mora", "Tsara ny asa fanompoana ho an'ny solosaina manokana", "solosaina nanjera" sns. Rehefa manao fizarana lohapejy dokam-barotra hafatra dia manova, ary ny mpampiasa dia mahazo hafatra ianao dia efa voafidy avy amin'ny lisitra ity tsapaka. Hetsika toy izany dia hampitombo be ny fahombiazan'ny fandefasana ny taratasy, izay no nitranga ny alalan ' ny sivana, ary ny vokatry Anao hahazo bebe kokoa ny fanehoan-kevitra avy amin'ny mailing list.
Ny foto-kevitra ao amin'ny mailaka, tokony ho voafaritra tsara. Rehefa namorona ny dokam-barotra hafatra ho an'ny dokam-barotra dia tsy ilaina ny mampiditra ao an-tsoratra dia mankaleo teny toy ny hoe "krizy", "ny fihenam-bidy", "ara-kevitra" ho amin'ny mety ho mpanjifa dia tsy misy liana. Rehefa mety ho mpanjifa, mijery Internet mail, nanamarika ny fanangonan-karena ny maro be ny hafatra, izany fahatarana ny mijery afa-tsy ho an'ny taratasy izay ny lohahevitra dia ny tsara tarehy indrindra sy mahaliana, sy ny sisa ny hafatra miandry avy hatrany ny fanesorana. Ohatra, raha toa Ianao mamaritra ny foto-kevitra — "efa tapaka ny TV?", ny mpandray ny hafatra izay TV tena tsininy, avy hatrany te-hanokatra Ny dokambarotra.
Ampidiro ny vidiny, raha toa ka ny tolotra dia lafo. Tsy mamaritra ny vidiny raha toa ka lafo vidy izy ireo.
Aoka ny hoe Ny raharaham-barotra dia refilling mpanonta cartridges, sy ny vola lany amin'ny asa fotsiny 300 robla — aza adino ny manoratra momba izany ao amin'ny gazety! Mpandray ny faobe mailing dia ho hita miharihary avy hatrany fa izy ireo dia afaka manam-bola mba hameno ny mpanonta ny vidiny, ary izy ireo dia tsy matahotra ny hiantso Anao. Voalaza vidiny ambany dia ambany dia hahatonga azy ireo no tena liana amin'ny tolotra. Raha, ohatra, ianao te-hivarotra ny sambo na trano bongony amin'ny alalan'ny dokam-barotra, sy ao amin'ny sanda izany dia tsara kokoa mba hangina. Momba toy izany ny varotra tsy maintsy nanaiky ny mpanjifa tsirairay. Asa fizarana ao amin'ity tranga ity dia ny hanao izay angatahany ny olona rehefa nahazo mailaka hifandray Anao, ary avy eo nampiasa ny fahaiza-manao ny mpivarotra.
Tsarovy tsara ny manoratra taratasy fampahafantarana dia miankina amin'ny vokatra farany!
Mahomby tapakila amin'ny XMailer!